Mon, Jan 17, 2022 | 21:13:59 NST
Posted: Monday, May 28, 2018 07:37 AM (4years ago )
जेठ ११ – क्रिकेटमा जे पनि सम्भव छ त्यसै भनिएको होइन । नत्र १० बलमा रनको खातै खोल्न नसकेको ब्याट्स्म्यानले थप ४७ बलमा १ सय १७ रन कहाँ बनाउँछ ? यस्तो गज्जब प्रदर्शन गरेका हुन् अष्ट्रेलियाली ब्याट्स्म्यान शेन वाट्सनले । ३६ वर्षीय वाट्सनले आईपीएल क्रिकेटको फाइनलमा चेन्नई सुपरकिंग्सबाट नटआउट १ सय १७ रन बनाउँदै फाइनलमा सबैभन्दा धेरै रन बनाउने खेलाडी बनेका छन् ।
यसअघि, सन् २०१४ मा ऋद्धिमन साहले पञ्जावका तर्फबाट कोलकाता नाइटराइडर्सविरुद्द १ सय १५ रन बनाएका थिए । तर त्यो खेल पञ्जावले हारेको थियो । त्यसैले वाट्सन नाममा अर्को रेकर्ड पनि बन्यो, आईपीएलको फाइनलमा शतक हानेर आफ्नो टिमलाई जिताउने पहिलो खेलाडी । उनी आईपीएलमा लक्ष्य पछ्याउने क्रममा शतक बनाउने पहिलो ब्याट्स्म्यान पनि बनेका छन् ।
१ सय ७९ रनको लक्ष्य चेन्नइको ब्याटिङलाईनका लागि ठूलो चुनौती थिएन । तर चनाखो हुनुपर्ने कुरा के थियो भने हैदरावाद खतरनाक बलरहरुको टिम थियो । थोरै रन मात्र बनाए पनि खेल जित्ने क्षमता प्रमाणित गरिसकेको हैदराबादमा भुवनेश्वरकुमार, रासिद खान, सिद्धार्थ कौल, सन्दीप शर्मा जस्ता खतरनाक बलरहरुको टोली थियो ।
नभन्दै हैदरावादले सुरुवात गर्यो पनि त्यस्तै । भुवनेश्वर कुमारले पहिलो ओभर मेडन राखे । ब्याटिङमा थिए उनै वाट्सन । १६ रन बनाउँदा ओपनर फाफ डु प्लेसिस आउट भएपछि हैदराबादको बलिङ सामु चेन्नइका ब्याट्स्म्यान निरीह होलान् झै देखिएको थियो । चेन्नइका समर्थक भने चुक्चुकाउन थालिसकेका थिए, आज पनि हैदरावाद मध्यम लक्ष्य ‘डिफेण्ड’ गर्ने टिम पो बन्ने हो कि ?
त्यसबेलासम्म चेन्नईले जित्ने लगभग तय भैसकेको थियो । चेन्नइका समर्थक हँसिला र हैदरावादका समर्थक रुन्चे बनिसकेका थिए । वाट्सन रोकिनुपर्ने कारण केही थिएन । उनले ओभरका अन्तिम २ बलमा रासिदलाई लगातार २ चौका हाने । उनले १८ औँ ओभरका चौथो र पाँचौ बलमा पनि लगातार २ चौका हाने ।
१९ औँ ओभरको तेस्रो बलमा अम्बाती रायडुले चौका हान्दै चेन्नईलाइ जिताए । चेन्नईका सबै खेलाडि म्यान अफ द म्याच वाट्सनलाई अंगालाे हाल्न र खुशी मनाउन केन्द्रित भए ।